Sweden: Ururada muslimiinta oo codsaday in la adkeeyo amaanka masaajida - NorSom News
Sweden: Ururada muslimiinta oo codsaday in la adkeeyo amaanka masaajida
Waxaa isbuucii hore dab la qabadsiiyay masaajidka Örebro oo kamid ah masaajidada ugu waaweyn dalka SWEDEN. Dabkaas ayay boolisku sheegeen inuu ahaa mid si ula kac ah masaajidka loo qabadsiiyay, ujeeduduna ay aheyd in dad lagu dilo. Waxeyna usoo qabteen nin dhalinyaro ah, kaas oo markii danbe qirtay inuu ahaa qofkii ka danbeeyay dabkaas.
Ururada muslimiinta dalka Sweden ee gacanta ku hayo masaajidada ayaa dowlada Sweden ka codsaday in la adkeeyo amaanka masaajidada, maadaama ay sanooyinkii ugu danbeeyay aad usoo bateen falalka weerarada ah ee loo geysto masaajidada. Ururada muslimiinta ayaa warqad ay si wadar ah ugu direen laamaha amaanka dowlada Sweden ku cadeeyay in xaaladu ay ka duwantahay midii hore, loona baahanyahay in la sameeyo talaabooyin cusub oo dheeri ah, si loo sugo amaanka goobaha cibaadada dadka muslimiinta ah.
Dalka Sweden ayaa waxaa sanooyinkii ugu danbeeyay aad ugu soo badanayay falalka naceybka ah ee ka dhanka ah dadka muslimiita ah ee dalkaas kunool.
Previous articleDN: Frp oo raba in wasaarada cadaalada la hoos geeyo Listhaug
Next articleUSA: In kabadan 50 ruux oo ku dhimatay toogasho ka dhacday Las Vegas